Home ELITE FOOTBALL Michel Platini Ụmụaka Akụkọ nke Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Agbanwe
LB na-egosi Full Story of a Football Elite onye aha ya bụ "Eze". Anyị Michel Platini Ụmụaka Akụkọ na Iwepụ Akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge. Nyocha a na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndabere ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, na ọtụtụ ndị ọzọ OFF-Pitch facts (amaghị) banyere ya.
Ozi Micheal Platini bụ akụkọ ọzọ na-adọrọ mmasị nke na-eme ka ị gaa njem nke ọ na-ebili site n'ọchịchịrị ruo n'ịbụ onye a ma ama na njedebe jọgburu onwe ya nke ọganihu o mere ọtụtụ afọ. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Michel Platini Ụmụaka akụkọ nke na -Ndụ mbido
Michel François Platini mụrụ na 21st ụbọchị nke June 1955 na Joeuf, France. A mụrụ ya nna ya, Aldo Platini bụ onye n'oge a mụrụ ya bụ onye nkụzi na onye nchịkwa ndị nledo amateur. N'aka nke ọzọ, nne Michel, Anna Platini bụ onye na-aga agha na Bar des Sportifs nke na-asụgharị dịka ogwe egwuregwu. Nne na nna ya na-etiti na-atụ aro ka ọ bụrụ mmalite dị umeala n'obi nke Michel.
Na-etolite na-eto eto na-eto eto bụ Michel - dị ka ọtụtụ ụmụaka n'oge ya - were mgbe nna ya na-ahọrọ mmasị egwuregwu, bọọlụ na e kwere ka egwu egwuregwu n'okporo ámá na-abaghị uru.
N'oge na-adịghị anya tupu ọ ghọọ onye a ma ama n'etiti ndị ọgbọ ya ma nụ aha ya mbụ na aha ọjọọ "Peleatini"Na ekele nke otuto na-eti ya n'ihi na ya na football football prowess.
Ihe a na - ahụ anya n'etiti nkà nwata ọ nwere bụ ikike o nwere ịme ntụrụndụ nke ndị agbata obi na obodo ya weere dịka ihe iyi egwu nke ndụ na ihe onwunwe.
Michel Platini Ụmụaka akụkọ nke na -Nkwenye Obi Ọjọọ
Ka o sina dị, Michel nwere obi ụtọ banyere ihe bọl nwere maka ya ma mee ihe kasị mma ọ ga-eji mee egwuregwu ahụ. Mgbe ọ gafeworo ọtụtụ afọ n'ịhụ bọl na-aga n'okporo ámá, Michel zoro aka maka ọrụ aka na FC Metz, ma ụlọ ọrụ ahụ jụrụ ya nke na-eche na ya adịghị ike iji bọlbụ na-enyo enyo na ya nwere obi ike.
Na-eto eto ma na-achọsi ike, Michel abụghị onye ga-ekwe ka ohere jiri aka ya gafee. O mere mkpesa megide nzere ya site na ulo a ma nye ya ohere iji gosiputa ike ya n'abughi n'atu egwu kama site na ikuku ikuku n'ime igwe nke onye okazi ndi okachamara nke FC Metz ji eme ihe.
N'inweghi ohere inye ohere, Michel nyere ule karịa ihe kachasị mma ya ma mee ka afọ ole na ole gasịrị, ọganihu dọkịta ahụ weere dịka nkwenye nke enweghị ike na nkwenye maka ịjụ.
Michel Platini Ụmụaka akụkọ nke na -Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ
N'ịbụ onye na-akụda, na-akụda ma na-adaghị ada, Michel họọrọ mkpụrụ ndụ ya ma nye ọkachamara ọkachamara n'ụgbọelu na ụlọ nkwonkwo ọ kwenyesiri ike na a nabatara ya dịka obi obi ya na-enweghị ike ịjụ ihe ọzọ.
Kedu okpokoro ndị ọzọ nwere ike ịmekwu ihe karịa AS Nancy ebe nna ya na-arụ ọrụ dịka onye so n'òtù football football?.
Dị ka ihe ga-emesị pụta, nchọpụta ahụ na-ezighị ezi nke dọkịta Metz ahụ ghọrọ ezigbo ọgaranya nke ndị agbata obi na ndị na-agba egwu AS Nancy Lorraine ebe Michel tinyere ọrụ dị egwu nke mere ka ọ bụrụ onye a ma ama ma ọ bụ onye na-egwu isi.
Michel Platini Ụmụaka akụkọ nke na -Bilie Iji Mara Aha
Ọ bụ na AS Nancy na Michel zụlitere nkà na-enweghị atụ, na-enyekwa ikike zuru oke, na ịchọta ikike dị mma, isi ihe mgbaru ọsọ 98 na 181 egwuregwu. Na 21 afọ, Mitchel mere mba mbụ ya maka France ebe ndị ọzọ National Team karịsịa Czechoslovakia ahụhụ site na bọtịnụ free-kicks.
Mmiri mmiri na-ekpo ọkụ na-asa mgbe Michel dị ka onye na-egwu egwu na Juventus (mgbe ọ gbasịrị ọsọ na Saint Etienne) meriri ugwo ma merie ihe mgbaru ọsọ megide Liverpool nke mere ka akụkụ ya wepụ European Cup. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Michel Platini Ụmụaka akụkọ nke na -Ndụ mmekọrịta
Enweela otu nwanyị na akụkọ Michel Platini na ọ bụ nwunye ya bụ Christelle Bigoni.
Michel ka na-egwu egwu maka AS Nancy mgbe ọ zutere nwunye ya bụ Christelle, bụ nwa akwụkwọ mmụta sayensị. Ọ bụkwa egwuregwu na-ahụ n'anya, ọ dịghịkwa mgbe ọ na-ezere ịkọwa di ya na ụzọ dị iche iche ya.
Di na nwunye ahụ lụrụ na 1977 ma nọgide na-alụ di na nwunye kemgbe.
Ha na-eto eto na ụmụ abụọ, Laurent Platini na mmiri Platini.
Michel Platini Ụmụaka akụkọ nke na -Nsogbu egwuregwu nke Heysel
Ugwurugwu egwuregwu nke Heysel bụ nsogbu n'etiti Liverpool na Fans ndị Juventus, bụ nke hụrụ na nke a na-adaba na mgbidi nke mechara daa. Ihe ọjọọ ahụ mere na 29th nke May 1985, dugara ọnwụ nke ndị 39-ọtụtụ ndị Ịtali na ndị Juventus - mgbe ọbụlagodi na 600 ndị ọzọ merụrụ ahụ.
Esemokwu nke mere n'ụbọchị ahụ na ebe ndị Michel Platini nwetara ugwo ma na-emeri ihe mgbaru ọsọ megide Liverpool iji tinye ego nke Europe emewo ka ọtụtụ ndị weere ya dị ka Michel Platini dị ka enweghị nchekasị maka ememe mgbaru ọsọ ya na-emeri n'agbanyeghị ọnwụ nke ndụ e dere na ụbọchị na-enweghị atụ.
Michel Platini Ụmụaka akụkọ nke na -Ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na Post-Professional
Michel Platini lara ezumike nká mgbe ọ bụ agadi 32 na June 1987. Ọnwa ole na ole mgbe ọ lara ezumike nká, ọ na-azụ ọrụ nchịkwa dị ka onye na-elekọta French National Side na 1988 ma hụ na otu ya ruru eru maka 1992 European Championship tinyere akụkọ dị egwu nke mmeri niile egwuregwu asatọ.
N'agbata 1988 ruo 2006 Michel sonyere ndị UEFA na FIFA, na-eje ozi n'okpuru kọmitii dị iche iche ruo mgbe ọ nọ na 2006, na-agbaso Lennart Johansson ma merie ya maka ọnọdụ dị elu nke ndị isi oche UEFA.
Ọnọdụ onyeisi oche nke Platini mere maka afọ 8, ụbọchị 255, oge nke dị nnọọ iche na afọ 16 nke onye bu ya ụzọ, bụ Lennart Johansson. Gịnị gaara eme ka ọgụgụ isi French kwụsị oge ya dị ka president nke UEFA; ọchịchọ ma ọ bụ mkpa ?.
Michel Platini Ụmụaka akụkọ nke na -Ejiri aka na-emebi iwu
Platini dị mma iji dochie onyeisi oche FIFA ahụ, bụ Sepp Blatter, bụ onye kwụsịrị na 2015, ma e kwenyere na duo (Platini na Blatter) kwenyere na nrụrụ aka, mmezigharị, esemokwu mmasị, ịgha ụgha na nkwenye na komiti nke ụkpụrụ FIFA.
Ọganihu ahụ mebiri njedebe nke president Platini (ebe ọ bụ na e nyere ya nkwụsị 8 na football bụ nke e mesịrị mee ka ọ bụrụ afọ 6), na-enye Gianni Infantino onye na-agbagha ma merie ọnọdụ ahụ dị mma. Ọ na-edugakwa na ya arụkwaghịm dị ka onye president UEFA mgbe ọ kwụsịrị ịgbachi iwu isii ya site na bọlbụ gbanwere.
Michel Platini Ụmụaka akụkọ nke na -Eziokwu ndị ọzọ
Mgbasa Platini gaa na Juventus n'oge okpomọkụ nke 1976 adịghị adabere na nkwekọrịta kamakwa ego ọnụahịa dịka ọ bụla iwu French n'oge ahụ.
O nwetara ihe dị egwu nke na-apụta maka mba abụọ na egwuregwu ụwa. (France na Kuwait)
Ọ bụ onye mmeri atọ nke Ballon d'Or. Nke a mere n'afọ; 1983, 1984 na 1985.
Ọ bụ Zidine Zidane arụsị nwata.
N'oge ya dị ka onye na-elekọta ndị na-elekọta football, ọ na-agbasi mbọ ike nyefe ndị na-egwu 18, bụ nke ọ na-ewere dịka iwu na-akwadoghị ụdị ịzụ ụmụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Michel Platini Childhood akụkọ na akụkọ ndị ọzọ dị egwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.